गान्धी–विरोधको सन्दर्भ- विविधा - कान्तिपुर समाचार
वैशाख २९, २०७५ प्रदीप गिरि
काठमाडौँ — ‘मेरा विचार फेरिइरहन्छन् । हिजोका र आजका मेरा भनाइ फरक पनि हुन सक्छन् । त्यस्तो फरकमा मेरा पछिल्लो कुरालाई मान्यता दिनुहोला !’गान्धी यस्तो कुरा भनिरहनु हुन्थ्यो । आफ्नै कथनी र कथनीमा फरक छ भन्ने उहाँलाई थाहा थियो, अनुभूति थियो उहाँमा ।
राल्फ वाल्डो इमर्सन गान्धीका एक प्रिय लेखक थिए । इमर्सनको ‘अ फुलिस कन्सिस्टेन्स इज द हवगोब्लिन अफ लिटल माइन्ड्स’ उनको प्रिय उद्धरण थियो । नेपालीमा भन्नुपर्दा ‘आफ्ना मुर्खतापूर्ण निरन्तरतामा क्षूद्रमात्र अडिग रहन्छन् भन्न सकिएला ।’
वैशाख २५ गते राजेन्द्र महर्जनको गान्धी र लोकतन्त्रका विषयमा एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी छापिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको मेरो ‘लोकतन्त्रको विमर्श’को उल्लेख गरेर उहाँले आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ । यताका दशकहरूमा भएका प्रत्येक जनआन्दोलनमा नेपाली कम्युनिस्टहरूको अमूल्य योगदान छ । समकालीन बौद्धिक जगतमा माक्र्सवादको उल्लेख्य उपस्थिति छ । क. घनश्याम भुसाल र क. राम कार्कीको अभिक्रममा कार्ल माक्र्सको द्वितीय जन्मशताब्दीको राष्ट्रिय आयोजना जारी छ । तद्नुरुप माक्र्स र माक्र्सवाद विषयमा नेपालको शिक्षित जमात अनभिज्ञ छैनन् । विपरीतत: गान्धीका बारे गलतफहमीको डङ्गुर छ । क्रान्तिको सपना बोकेर हिँडेका युवा जमातका निम्ति माक्र्स–एंगेल्स श्रद्धास्पद छन् । यहाँसम्म ठिकै छ । तर यस जमातले गान्धीलाई बुझ्दा उनीहरूको क्रान्ति चेतना झन् गहन र शुद्धमात्र हुने हो । क्रान्तिकारीले सिकेर थाक्दैन, सिकाएर थाक्नु हुँदैन— माओत्सेतुङले बारम्बार लेखेका छन् ।
समाजवादी क्रान्तिको परम्परामा सिद्धान्तको केन्द्रीय महत्त्व रहेको छ । क्रान्तिकारी सिद्धान्त नहुँदासम्म क्रान्तिकारी व्यवहार हुनै सक्दैन भनी लेनिनले बारम्बार भनेका छन् । नभन्दै लेनिन, माओ, जयप्रकाश नारायण, लोहिया सबैले समाजवादी राजनीतिको पूर्वाधारका रूपमा आफ्नो समाज–बोधको रूपरेखा पहिले अगाडि सारेका छन् । त्यसमा आधारित भएर राजनीति गरेका छन् । गान्धी केही पृथक छन् । गान्धीले राजनीतिक गतिविधि थाल्दा उनीसँग व्यवस्थित विचारधारा थिएन । विशुद्ध व्यावसायिक उद्देश्यले उनी दक्षिण अफ्रिका पुगेका थिए । त्यहाँ पुग्नासाथ एक रेल यात्रामा उनी उचित टिकट हुँदाहुँदै पनि आफ्ना डिब्बाबाट घोक्र्याइए । दक्षिण अफ्रिकाको त्यस मारिन वर्गको रेलवे स्टेसनमा त्यस रात घोक्र्याइँदाका दिन उनी ब्रिटिस साम्राज्यको न्यायप्रियताप्रति विश्वस्त थिए । तर त्यही नै उनको तत्कालीन सत्य थियो । लगत्तैपछि स्वाभिमानी गान्धीले सत्याग्रहको प्रयोग प्रारम्भ गरे । गान्धीको राजनीति मुख्यत: सत्यप्रति आग्रह थियो ।
गान्धीको जीवनी उनकै शब्दमा सत्यको प्रयोग थियो । गान्धीलाई अनेकनले धर्मान्ध–हिन्दु भनेका छन् । गान्धी आफ्ना कुराकानीमा ईश्वर–अल्लाह–राम आदि नाम लिइरहन्थे । तर ईश्वर के हो ? अथवा राम को हुन् भन्ने कुरामा उनको ठोस उत्तर थियो । अयोध्याका राजा दसरथका छोरा राम उनको राम होइनन् । उनले स्पष्ट भनेका छन्— सत्य नै ईश्वर हो । तद्नुरुप उनको राम सत्य हो । सनातन परम्परामा राम को हुन् ? भन्ने विषयमा गान्धी अघि पनि यस्तो विमर्श भने पहिले पनि भएको थियो । महाकवि तुलसीदासले यसै प्रश्नबाट रामचरित मानस सुरु गरेका छन् । तर त्यो प्रसंग अहिले रहोस् ।
गान्धी झन्डै ६० वर्ष सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय रहे । यस कालावधिमा विश्वमा कल्पनातीत परिवर्तन भइरह्यो । गान्धी स्वयम् विशाल उथल–पुथलका सूत्रधार भए । तद्नुरुप गान्धीका विचार र व्यवहारमा परिवर्तन आउँदै गयो । माथि भनिएझैं प्रारम्भमा गान्धीलाई अंग्रेजी शासनको न्यायप्रियतामा पूर्ण विश्वास थियो । सुरु–सुरुमा महारानी भिक्टोरियाको १८५८ को शाही घोषणाको उनले ठूलो प्रशंसा गरेका छन् । पछि गएर उनी अंग्रेजी साम्राज्यवादको भयंकर विरोधी भए । यो विरोध अंग्रेजी सभ्यता र साम्राज्यवादसँग थियो । अंग्रेजसँग थिएन ।
अफ्रिका प्रवासका प्रारम्भिक वर्षमा गान्धीमा नश्लवाद पनि देखिन्छ । अफ्रिकन जेलमा कालासँग बस्नुपर्दा उनी क्षुव्ध थिए । जेलबाट लेखिएका उनको चिठीमा नश्लवादी टिप्पणी छ । कस्तुरबासँगको उनको प्रारम्भिक व्यवहार सर्वथा निन्दनीय थियो । छोरा हरिलालको विद्रोहको कथा उपन्यास र सिनेमाको विषय बनेको छ । हरमन कालिनबाच (१८७१–१९४५) उनका प्रियतम मित्र थिए । गान्धी र कालिनबाचका बीचमा समलैंगिक सम्बन्ध थियो भन्ने कुरो यताका वर्षमा शोधकर्ताहरूको विषय भएको छ । जीवनको आखिरी दशकताकाका गान्धीका यौनाचार उत्तिकै आपत्तिजनक थिए, त्यो पनि सर्वविदित छ ।
संक्षेपमा भन्दा गान्धीको निजी जीवनको महाभारतमा एउटा निन्दा–पर्व लेख्न सकिन्छ । तर कुरो उनको सार्वजनिक जीवनको हो । त्यसमा पनि हिन्दुत्व, वर्णाश्रम र पुँजीवादको हो ।प्रथमत: वर्णाश्रमको कुरा † डा. अम्बेडकरले गान्धीलाई यस्तै प्रश्नमा घेराबन्दी गरेका थिए । विलकुलै ठिक गरेका थिए । यतिले नपुगेर अम्बेडकरवादी नेताहरू तथा युपीको पूर्व मुख्यमन्त्री मायावतीले गान्धीको मूर्ति तोड्ने आह्वान गरेकी थिइन् । यत्रतत्र तोडफोड पनि भयो । गान्धीको मूर्ति बन्नु नै गलत थियो । बनेपछि तोडिन्छ । नेपालमा द्वितीय जनआन्दोलनमा यस्तै परिदृश्य देखिएको थियो । यो पनि स्वाभाविक नै हो ।
राजनीतिक जीवनमा गान्धीका तीन प्रमुख सैद्धान्तिक विरोधी थिए । प्रथम, पाकिस्तानका राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना । द्वितीय, डा. भीमराव अम्बेडकर । तृतीय, विनायक दामोदर सावरकर । विरोधी अरू पनि थिए । सुभाषचन्द्र बोससमेत विरोधी थिए । जवाहरलाल नेहरूलाई पनि विरोधी भन्न मिल्छ भन्ने भाजपाका बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ । तर आधारभूत कुरामा जिन्ना, अम्बेडकर र सावरकरले गान्धीलाई चुनौती दिए । नेहरू र सुभाषले जस्तै होहल्ला गरे पनि उनीहरू गान्धीसँग सँंगसँंगै हिँड्न चाहन्थे र सकेसम्म हिँडेका पनि थिए ।
अम्बेडकरले गान्धीको हरिजनप्रतिको प्रेमलाई पाखण्ड र धुत्र्याइँ भन्थे । बालक अम्बेडकरले आफ्ना जीवन संघर्षमा पाइला–पाइलामा उच्च जातिको अपमान खप्नुपरेको थियो । उनले वर्ग र वर्णको अन्तरसम्बन्धका बारे गहन र वैज्ञानिक अध्ययन गरेका थिए । गान्धीलाई त्यस विषयको विशेष जानकारी थिएन । राजनीतिक क्षेत्रमा अम्बेडकर दलित समुदायलाई संरक्षणको बाटोमा लैजाने क्रममा अंग्रेज साम्राज्यसँग नजिक भए । लन्डनमा भएको द्वितीय गोलमेच सम्मेलनमा अम्बेडकर र गान्धीको यस विषयमा ठूलो टक्कर परेको थियो । अम्बेडकरले अंग्रेजसित अछूतका निम्ति पृथक–मताधिकार मागेका थिए । अंग्रेज त्यस्तो मताधिकार दिन तयार थिए । यसै विषयमा गान्धी र अम्बेडकरको कटु विवाद भएको थियो ।
मोहम्मद अली जिन्नाको यस्तै कथा थियो । जिन्ना आफ्नो प्रारम्भिक राजनीतिक जीवनमा हिन्दु–मुस्लिम एकताका प्रखर हिमायती थिए । सरोजनी नायडुले हिन्दु–मुस्लिम एकताको राजदूत भन्थिन् । गान्धीले कांग्रेसको हिन्दुकरण गरे भन्ने जिन्नालाई पछि लाग्न थाल्यो । गान्धी र उनको नेतृत्वको पार्टीले मुसलमानलाई न्याय दिन सक्दैन भन्ने सोचेर उनी कांग्रेस राजनीतिबाट विमुख भए । यसै विश्वासमा आधारित भएर पाकिस्तान लडेर लिए । जिन्ना गान्धीलाई हिन्दुहरूको नेता मान्थे । मोहम्मद अली जिन्ना गान्धीको ईश्वर अल्लाह तेरा नाम भन्ने भजनप्रति शंकालु थिए । गान्धी हृदयबाट हिन्दुवादी हुन् । उनले हिन्दुत्वका हितका निम्ति कांग्रेसलाई सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने उनको मान्यता थियो ।
विनायक दामोदर सावरकर गान्धीलाई हिन्दु मान्न तयार थिएनन् । सावरकर हिन्दु–राष्ट्रवादको प्रथम प्रवक्ता थिए । सावरकर विद्वान, हिम्मती एवं ‘राष्ट्रभक्त’ राजनीतिज्ञ थिए । गान्धी र उनका चेलाहरू राजनीतिक स्वार्थका कारणले गर्दा मुसलमानको तुष्टीकरण गर्दैछन् । गान्धी भारत माताका कुपुत्र हुन् । गान्धीका कारणले भारत विभाजित भयो भन्ने उनको मान्यता थियो । उनी नाथुराम गोड्सेका प्रत्यक्ष गुरु थिए । गान्धीको हत्याको मुकदमा अभियुक्त थिए । सावरकरद्वारा प्रवर्तित यो धारा समसामयिक भारतमा आज पनि सशक्त छ । तर गान्धीको अल्लाह–ईश्वरले यस धारालाई अगाडि बढायो भन्नु कुतर्क नभए पनि अतिशयोक्ति अवश्य हुनेछ ।
आजको भारतमा गान्धी विरोधी साहित्य प्रचुर मात्रामा उपलब्ध छ । बहुरूपी र बहुविवादी गान्धीबारे यस्तो हुनु खुसीको विषय हो । उनको विरोध र निन्दा हुनैपर्छ । अनि मात्र भुस र चामल निफनिन्छ । ‘निन्दक नियरे राखिए ...’ भन्ने कवीर–वाणी गान्धीको भजनावलीको अंग थियो । गोराका नामले जानिने जी. रामचन्द्र राव भारतका एक प्रसिद्ध नास्तिक हुन् । उनी गान्धीका परम मित्र भए । गान्धीले गोराका निम्ति आफ्नै आश्रममा समेत मांसाहारको छुट दिएका थिए । तर गान्धीको आलोचना गर्दा यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को कुरो छ । गान्धी राजनीतिमा अटाएका मानिस थिएनन् । उनको केन्द्रीय चासोको विषय पाश्चात्य सभ्यता थियो । गान्धीका नजरमा जिन्ना, अम्बेडकर र सावरकर पश्चिमी सभ्यताका सन्तान थिए । उनीहरू आफैंमा विभाजन र विग्रहका हेतु थिएनन् । पश्चिमी सभ्यताले विभाजन, विग्रह र विभेदको विजारोपण गरेको हो । जिन्ना, अम्बेडकर र सावरकर परिणाम मात्र हुन्, कारण होइनन् ।कारण के हो त ?
कारण हो– पश्चिमी सभ्यता । गान्धीले यसलाई शैतानी सभ्यता भनेका छन्, राजेन्द्र महर्जनले ठिक सम्झाउनुभएको छ । यस शैतानी सभ्यतालाई गान्धीले आधुनिक सभ्यता पनि भन्थे । औद्योगीकरणमा आधारित जीवनशैली पनि भन्थे । यसै सभ्यताले साम्राज्यवादलाई जन्म दिएको हो भन्ने उनको ठहर थियो । लेनिनले साम्राज्यवादलाई पुँजीवादको उच्चतम अभिव्यक्तिका रूपमा लिएका छन् । गान्धीले सभ्यता–विमर्शमा साम्राज्यवादको जरो भेटेका छन् । भूमण्डलीकरणको यस युगमा गान्धीलाई यस कसीमा राखेर हेर्नुपर्छ । अनि मात्र गान्धीलाई खारेज गर्न सकिन्छ ।राल्फ वाल्डो इमर्सनको एक उद्धरणबाट यो टिप्पणी थालिएको छ । इमर्सनले त्यस टिप्पणीको पुछारमा थपेका छन्, ‘महान मानिस अनिवार्य रूपमा गलतफहमीको पात्र हुन्छन् । गान्धी यसको अपवाद छैनन् ।’
त्यस दृष्टिले राजेन्द्र महर्जनको हस्तक्षेपको सर्वथा स्वागत छ ।
प्रकाशित : वैशाख २९, २०७५ ०७:३१
लोकतन्त्रको कुनै पनि प्रयोगले गान्धीको स्वराजलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । कार्ल माक्र्सको आत्मनिर्वासनको धारणालाई बुझ्नुपर्छ अनि मात्र लोकतन्त्रको विमर्श–संवाद सार्थक हुन्छ ।
वैशाख २२, २०७५ प्रदीप गिरि
काठमाडौँ — सभ्यताको थालनीदेखि मानिसले आपस्तमा के कस्ता प्रकारले र कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुराले महत्त्व प्राप्त गरेको छ । यसै सिलसिलामा राज्य र राजतन्त्रको उत्पत्ति भयो । प्राचीन समाजमा गणराज्य पनि प्रयोगशील थिए । एथेन्समा भएको गणतान्त्रिक प्रयोगले प्लेटो र एरिस्टोटलको राजनीतिक चिन्तनलाई सूचित गरेको थियो । नेपालमा लिच्छवि गणराज्यको उल्लेख छ । गौतम बुद्धका पिता कदाचित त्यस्तै गणाधिपति थिए ।
राज्यको उत्पत्ति भएका दिनदेखि यस विषयमा विभिन्न सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको छ । यही नेपालमा एक दशक अघिमात्र दैवीय उत्पत्तिको सिद्धान्तले राजतन्त्रलाई वैधता दिएको थियो । यसका ठाउँमा सामाजिक संविदाको सिद्धान्त भन्न मिल्ने लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा राज्यको सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले गणतान्त्रिक संविधान स्वीकार गरेका छौं ।
लोकतन्त्र के हो भन्ने प्रश्नको सजिलो उत्तर भने छैन । प्रत्येक समाज वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, जाति, जातीयता, लिङ्गजस्ता अनेकानेक पहिचानमा बाँडिएका हुन्छन् । सबैले आफ्नो हित र चाहना अनुसार लोकतन्त्रको अवधारणालाई बुझ्छन् र बुझाउँछन् । तद्नुरुप लोकतन्त्रको सर्वसम्मत परिभाषा छैन । यस दृष्टिले लोकतन्त्र एउटा आदर्श हो, एक दुरस्थको ध्रुवतारा सरहको मार्गदर्शक हो । धरातलमा आउँदा सबै मनुष्य समान हुन्, सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ, उनीहरू सबैले मिलिजुली आफ्नो राज्य चलाउन–बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरोभन्दा बढ्ता भन्न जाँदा समस्या बल्भिँmदै जाने हो ।
राजतन्त्रको क्रमिक अवसानपछि युरोपका मुलुकहरू बेलायत, फ्रान्स वा जर्मनीमा जनताको प्रतिनिधिमूलक शासनको युग सुरु भयो । तर तत्काल सर्वभौम बालिग मताधिकारको प्रचलन भएन । अधिकांश युरोपियन देशहरूमा केही दशक अघिमात्र पनि सम्पत्ति नभएका मानिसलाई भोट दिने अधिकार थिएन । बेलायत र स्वीट्जरल्यान्ड जस्ता मुलुकहरूमा महिलाहरूले बिसौं शताब्दीमा मात्र भोट दिने अधिकार पाए । तर भोटले मात्र पनि राज्यको चरित्र थाहा हुँदैन । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि नेपालमा बालिग मताधिकार लागू भयो । बालिग मताधिकारका आधारमा छानिएको राष्ट्रिय पञ्चायत दरबारको अग्राधिकारको सामु निरीह थियो । माक्र्स, एंगेल्सका पालामा उनीहरूको मातृभूमि जर्मनीमा यस्तै निरीह संसद थियो । माक्र्स र एंगेल्सले त्यस संसदको उपहास गरेका थिए । बकबकेहरूको थलो— यस संसदले केही गर्न सक्दैन भन्ने उनीहरूको कटाक्ष थियो । कम्युनिस्ट राजनीतिमा कटाक्षको यो परम्परा लामो समयसम्म प्रभावकारी रह्यो । अहिले बरु धुमिल भएको छ । तर कार्ल माक्र्सको कटाक्ष न्यायसंगत थियो । यो कटाक्ष आज पनि प्रासंगिक छ ।
सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा रूसमा बोल्सेभिक क्रान्ति भयो । घटनाक्रम विकसित हुँदै जाँदा क्रान्तिको अन्तरवस्तुको कुरा विवादमा आयो । कार्ल काउत्सकी त्यस समय अन्तर्राष्ट्रिय माक्र्सवादका महापण्डित मानिन्थे । लेनिनले सोभियत क्रान्तिका माध्यमबाट रूसमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम गरे । आफूले माक्र्स–एंगेल्सको शिक्षालाई सोभियत रूसमा चरितार्थ गरेको भन्ने लेनिनको दाबा थियो । काउत्सकीलाई त्यो कुरो स्वीकार्य थिएन । काउत्सकी र लेनिनको विवादले व्यापक रूप लियो । विश्व समाजवादी आन्दोलन दुई भागमा विभक्त भयो । कार्ल काउत्सकी–एड्वर्ड वर्नस्टिनका अनुयायीहरूले संसदीय प्रणालीलाई समाजवादको एकमात्र बाटोको रूपमा मान्यता दिए । लेनिनवादीहरूले संसदीय व्यवस्था भनिने पुरानो राज्यलाई नष्ट नगर्दासम्म समाजवादको स्थापना सम्भव नहुने अडान राखे । लोकतन्त्रको स्वरुप र सार के हो त भन्ने प्रश्न यस विवादको केन्द्रमा उपस्थित थियो ।
त्यस दिनदेखि आजसम्म वागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । लेनिनको सोभियत व्यवस्था विघटित भएको छ । त्यो विघटन मुख्यत: आन्तरिक अन्तरविरोधले गर्दा हुनपुगेको थियो । त्यस विघटनले समसामयिक राजनीतिमा अनेकानेक विचारोत्तेजक बहस निम्त्यायो । सोभियत संघभित्र लोकतन्त्रको सामान्य प्रयोग नभएको र अन्तरपार्टी लोकतन्त्र त हुँदै
नभएको हुँदा त्यो व्यवस्था ढलेको हो भनेर धेरैले भने । कतिले अरुथोक पनि भने । यो बहस आज पनि जारी छ ।
सोभियत युनियन सन् १९८९–९० मा विघटित भएको हो । १९९२ इस्वीमा फ्रान्सेस फुकुयामाको ‘इतिहासको अन्त्य’ भन्ने पुस्तक प्रकाशित भयो । यो सिङ्गो दशकभरि चर्चित रह्यो । पश्चिमले प्रयोग र प्रतिपादन गरेको उदारवादी बहुदलीय व्यवस्था अब विश्वको एकमात्र विचारधारा रहन गएको छ । अब अरु कुनै विचारधारा बाँकी रहेन भन्ने फुकुयामाको तर्क थियो । वर्तमान रहेको भूमण्डलीकरण र स्वतन्त्र बजारको सिद्धान्त यस तर्कका उत्पत्तिमात्र थिए । १९८९–९० अघि विश्वमा समाजवादी (?) सिद्धान्तको बोलवाला थियो । राज्यको अभिक्रम र मार्गदर्शनमा मात्र लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना हुनसक्छ र त्यसले मात्र जनताको भलो गर्छ भन्ने आमविश्वास थियो । फुकुयामाले त्यस मान्यताको खण्डन गरे । विश्व व्यवस्थामा अहिले पनि फुकुयामा–प्रवृत्तिको बोलवाला छ । तर धरातलको वास्तविकता बेग्लै छ ।
उदारीकरणको पक्षधरले राजनीतिक दृष्टिले आफ्नो सफलताको दाबा गर्ने ठाउँ छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा उदारवादी लोकतन्त्र स्थापित छ । प्रेस स्वतन्त्रता, दलीय शासन प्रणाली, शक्तिको पृथकीकरण र सावधिक चुनाव यस्ता व्यवस्थाका केही विशेषताहरू हुन् । नेपालको संविधानले पनि यस्तै व्यवस्थाको तर्जुमा गरेको छ । नेकपा माओवादीले नयाँ जनवादको स्थापनाको उद्देश्यले दीर्घकालीन जनयुद्धको नेतृत्व गरेको थियो । पछि ७ दलीय सहमतिबाट ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । त्यस पृष्ठभूमिमा यस संविधान बनेको हो । थोरबहुत फेरबदलका साथ प्रचलित संविधानले संसदीय व्यवस्था कायम गरेको छ । आरक्षण लगायतका कतिपय नयाँ प्रयोग भएका छन् । तर ती प्रयोग मौलिक छैनन् । ती प्रयोगले संसदीय व्यवस्थाको सार र स्तत्वको अतिक्रमण गरेका छ्रैनन् ।
आफ्नो स्थापना कालदेखि संसदीय व्यवस्थाले विभिन्न कोणबाट आक्रमणको सामना गर्दै आएको छ । यस व्यवस्थालाई कमजोर र दिशाविहीन बनाउन गरिने वैचारिक र व्यावहारिक प्रहार खेपेको छ । अलग–अलग कोणबाट प्रहार खेपेको छ । ती प्रहारलाई सम्भँदा हामीले प्रजातन्त्रको र माक्र्सवादको सम्बन्धलाई ठिकले बुझ्न सक्छौं ।
१. यो अवश्य हो, माक्र्स–एंगेल्सले संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दा युरोपमा सीमित मताधिकार थियो । तर मताधिकारका कारणले मात्र माक्र्स–एंगेल्स त्यस्ता व्यवस्थासँग विमुख भएका थिएनन् । संसदीय व्यवस्थामा धनतन्त्रको बोलवाला हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो । फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति लगायत उन्नाइसौं शताब्दीका सबै क्रान्ति उनीहरूले सूक्ष्म रूपमा नियालेका थिए । त्यस्ता क्रान्तिहरूले आम जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराएन । देखाउने दाँत मात्र हो । राज्यले खाने दाँत त अर्कै छ भनेर उनीहरूले सेना, प्रहरी, गुप्तचर, बैंक, अदालत लगायतको वर्ग–चरित्रलाई औंल्याएका थिए ।
२. उदारवादी प्रजातन्त्र र पुँजीवाद जुम्ल्याहा होइनन् । विकासमा अवरोध भेटेको खण्डमा पुँजीवादले उदारवादका उपर घातक प्रहार गरेको उदाहरणले इतिहास भरिएका छन् । हिटलरको जर्मनीमा उदारवाद थिएन । तर पुँजीवाद फस्टाएको थियो । द्वितीय महायुद्धपछिका तेस्रो विश्वका अधिकांश तानाशाहले पुँजीवादको अवरोध गरेका थिएनन् । तर प्रजातन्त्र निमिट्यान्न गरेका थिए । राजा महेन्द्र स्वयम् यसका उदाहरण हुन् । राष्ट्र विकसित र शिक्षित नहुँदासम्म लोकतन्त्र काम लाग्दैन भन्ने महेन्द्रीय प्रवृत्ति आज पनि विश्वमा विद्यमान छ । यस प्रवृत्तिलाई उग्रराष्ट्रवादले अक्सर टेवा दिन्छ । स्वतन्त्रताभन्दा समानता ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुतर्कका आधारमा लोकतन्त्र निमोठ्ने खतरा यत्रतत्र देखिएको छ ।
३. गान्धी बेलायती जनजीवनसित राम्ररी परिचित थिए । उनको हिन्दस्वराज भन्ने एउटा सानो पुस्तक छ । त्यस पुस्तकमा उनले बेलायती राजनीतिक प्रणालीको घोर विरोध गरेका छन् । गान्धीले पुँजीवादबारे धेरै बोलेका छैनन् । उनले पश्चिमी सभ्यतालाई आफ्नो प्रहारको तारो बनाएका थिए । पश्चिमी सभ्यताले पुँजीवादलाई जन्म दिएको हो । लोभ र हिंसामा यो सभ्यता आधारित छ । यस सभ्यताको पूर्ण निषेध गरेपछि मात्र मानिस स्वाधीन हुनसक्छ भन्ने गान्धीको मान्यता थियो । गान्धी बेलायतको संसदीय प्रणालीले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्छन् । यसको निन्दा गर्दा उनले असंसदीय भाषासमेत प्रयोग गरेका छन् ।
गान्धीको थप भनाइ स्पष्ट छ— एक दिन प्रचुर र विपुल उत्पादन हुन्छ, अनिमात्र मानिस स्वाधीन हुन्छ भन्ने मान्यता गलत हो । इच्छाको दास भएको मानिस कहिल्यै पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन । मानिसले भौतिक विकासको संँगसँंगै आत्मसंयमको शिक्षा लिनुपर्छ । अनि मात्र सच्चा लोकतन्त्रको स्थापना हुन्छ ।
कर्णधारहरू नेपाललाई सिंगापुर र स्वीट्जरल्यान्ड बनाउने कुरा गरिरहन्छन् । त्यस्तो चाहना कत्तिको व्यावहारिक हो, आफ्नै ठाउँमा छ । तर त्यस्तो चाहनाले मानिसलाई वस्तुको दास बनाउँछ । एक चरणपछि मानिस आफै वस्तुमा परिणत हुन्छ । गान्धीलाई यस कुराको राम्रो बोध थियो ।
यस कुरोको बोध त कार्ल माक्र्सलाई पनि नभएको होइन । १८४६–४७ तिर कार्ल माक्र्सले दर्शनशास्त्र र अर्थशास्त्रका विषयमा टिप्पणीमूलक एक पुस्तिका लेखेका रहेछन् । कार्ल माक्र्सको देहान्तको धेरैपछि छापिएको यस पुस्तकमा आत्मनिर्वासनको (एलिनेसन) को प्रसंग आउँछ । पुँजीवादले मजदुरको शोषण गर्नु माक्र्सका निम्ति एउटा तथ्यमात्र थियो । पुँजीवादले मानिसलाई मानिस रहन नदिनु उनको प्रमुख चिन्ता थियो । पछि प्रौढ कार्ल माक्र्सले यस विषयमा विस्तारमा जान भ्याएनन् । तर उनको जीवनको केन्द्रीय आवेग स्वतन्त्रता थियो भन्ने तथ्य सर्वस्वीकृत छ ।
उहिल्यैको कुरा हो, तर हाम्रो पुस्ताले बिर्सिएको छैन । राजा महेन्द्रले हावा, पानी सुहाउँदो पञ्चायती प्रजातन्त्र ल्याएका थिए । अयुव खाँले पाकिस्तानमा आधारभूत प्रजातन्त्रको प्रयोग गरेका थिए । इन्डोनेसियामा सुकार्नोले निर्देशित प्रजातन्त्र चलाए । प्रजातन्त्र कानुनी वा संस्थागत परिपाटीको संख्या गनेर पूर्ण हुँदैन । कुन संविधानमा के कति धारा कस्ता छन् भनेर प्रजातन्त्रको परिचय हुँदैन । हिटलर, स्टालिन र राजा महेन्द्रले शासन गरेको संविधान हेर्दा यो कुरो थाहा पाइन्छ । संवैधानिक प्रत्याभूति, आवधिक चुनाव वा दलीय व्यवस्था प्रजातन्त्रको आवश्यक सर्त हुन् । तर ती पर्याप्त सर्त होइनन् । २०४७ सालको संविधानमा यावत नागरिक अधिकार संरक्षित र प्रत्याभूत थिए । तर त्यसले समेत माओवादी विद्रोहको सामना गर्न सकेन । यसको शिक्षा के हो ?
कुनै संवैधानिक व्यवस्थाभित्र लेखिएको अधिकार वा देखिएको संस्था गनाएर प्रजातन्त्रबारे ढुक्क हुन सकिँदैन । मुख्य कुरो त्यस व्यवस्थामा जनताले गर्नसक्ने र गर्नुपर्ने हस्तक्षेप हो । हाम्रो नेपालमा व्यवस्था बारम्बार फेरिएको छ । तर राजनीतिक दल, नेताहरू, प्रहरी, प्रशासन, अदालत, सेना र सञ्चार प्रणाली समेतको बानीबेहोरा उस्तै छ भने प्रजातन्त्र शब्दको अर्थ रहँदैन ।
तर जनता भन्ने शब्द पनि बडो मननीय छ । नेपालमा अहिले निर्वाचित राजनीतिक दलको शासन छ । दलहरूमा मध्यम वर्ग, अझ निम्न मध्यम वर्गको बोलवाला छ । यो वर्ग उपभोक्तावादको सन्निपातबाट ग्रस्त छ । उसको लोभको सीमा छैन । उसका भ्रमहरू अनन्त: छन् । केएफसीको मासु खान पैसा तिरेर क्युमा उभिन्छ, लाठ्ठी चार्ज गराउँछ । आई–प्याडको नयाँ संस्करण खरिद गर्न कुनै चिनियाँ युवकले आफ्नो एउटा किड्नी बेचेको खबर छापामा पढिन्छ । उपभोक्ता युगको प्रत्येक सदस्यले अन्तहीन आवश्यकताको अमित वासना बोकेर हिँडेको छ । तद्नुरुप लाचार छ ।
लोकतन्त्रको कुनै पनि प्रयोगले गान्धीको स्वराजलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । कार्ल माक्र्सको आत्मनिर्वासनको धारणालाई बुझ्नुपर्छ । अनि मात्र लोकतन्त्रको विमर्श–संवाद सार्थक हुन्छ ।
प्रकाशित : वैशाख २२, २०७५ ०८:१०